Haya Job Description / Functions Oo Template Xisaabtanka – JobDescriptionSample.org
Home / Uncategorized / Haya Job Description / Functions Oo Template Xisaabtanka
Haya Job Description / Functions Oo Template Xisaabtanka
Is ogow caruurta ee qoysaska shakhsiyeed iyo siiyaan in fulinta kid ee caadifadeed caawimaad iyo khibrad, jirka, garaadka, iyo waxay doonayeen bulshada. Waajibaadka mararka qaar waxaa ka mid ah qado diyaarinta iyo dhar, udiyaarin iyo dhar dareenka, shirkadda ee ku raaxaysan hawlaha iyo tours, anshaxa, reyn caaqil, hawlaha eraybixinta, iyo gaadiidka.
Naqdaan gargaarka degdegga ah ama kicinta wadnaha iyo sanbabbada (CPR) marka la filayaa.
Sharciyeyn kids’ dura nasashada iyo ajandayaasha hurdo.
si joogto ah ula kulmaan waalidiinta si ay u tagaan in ka badan kids’ joogtada u dhaca iyo horumar.
In loo sahlo diyaariyo iyo caawin fudud iyo cuntooyinka nafaqo-dheeli tiran loogu talagalay carruurta.
Tali carruurta ku dhaca dabeecadda ammaan, tusaale ahaan raadinaya gargaar dadka waaweyn ka fogaanayaan xiriir ama ku raaxaysan la isticmaalayo walxaha aan amaan ahayn iyo markii oolna ah jidka.
Diyaarso iyo madadaalada banaanka soo taago da'da ku haboon, sida kulan, Farshaxanka iyo farsamada gacanta, ciyaaraha, Socon, iyo ciyaaro-taariikhaha.
Eeg kids’ falalka ku saabsan dhibaatooyinka, fiirsan sharikadaha, carruurta gaadiid dhakhtar, ama Bixin daawooyinka, sida diiradda, si ay u ilaaliyaan da'da yar’ fayoqabka.
U samaynta dhaqanka habboon iyo kor arrinta dadka kale in la kordhiyo horumar of xiriir dhexdooda iyo xirfadaha dhexgalka.
Caawiyo waalidiinta fuliyo iyo in la dhiso ilaa barnaamijyada gacanta si kor loogu qaado dhaqanka ilmahaagu doonayo.
Ka caawi monitor ama dhisaan jadwalka qoyska.
Maamul iyo caawinaad cilmi.
Go'aaminta hawlaha saxda ah iyo dabeecadaha abaal diiradda si loo dhiiri horumar of selfcontrol, isku-kalsoonaanta, iyo masuuliyada.
carruurta gaadiid jaamacadaha, kulan in ay yihiin bulshada, iyo fadhiyada caafimaadka.
mas'uuliyadaha Nadiifinta iyo fillaysii anshaxa la xiriira-in daryeelka carruurta.
Baro iyo hanuunin da'da yar ee horumarka tusaale ahaan, slumbering, iyo falalka musqusha, caymiska caafimaadka iyo caadooyinka shakhsiga.
Ilaali files bixinta biilka, jeer cunto, oo wuxuu ku raaxaysan.
Qabashada iyo tababar hawlaha Zaman-ku haboon, sida tusaale ahaan guddi raaxaysan, waxbarashada, iyo fanka iyo farsamada si ay u dhiirigeliyaan horumarka buuxa ee da'da yar.
Baabi'iyo iyo horumarinta xadka ku haboon iyo mabaadi'da in ay soo saaraan jawi ilaaliyo waayo, yarta.
Job Hawlaha lagama maarmaan
Akhrinta cutubyada fahamka-oge cutubyada ku qoran waraaqaha shaqada ku jira ee la xiriira.
Dhagaysi-To waxa dadka kale leeyihiin bandhiga dhamaystiran dareenka Active,, iyadoo la isticmaalayo waqti si ay u fahmaan faahfaahinta la abuuray, weeydiin su'aalo sida saxda ah, oo aan marnaba mesmerizing at daqiiqado kuwa aan habboonayn.
Abuuritaanka-On warqad sida haboona baahida daawadayaasha ka hadalka hufan,.
Sheekaysiga-hadalka dadka kale in la xuso xog wax ku ool ah.
Technology-Isticmaalka xeerarka caafimaadka iyo farsamooyinka si ay u xaliyaan dhibaatooyinka.
Halis ka fakaraya-Adeegsanaya macquulka ah oo u maleeyey in la ogaado xirfadaha iyo meelaha fikradaha, daawooyinka kale ama habab dhibaatooyin.
Active-Learning-Fahamka faa'iidooyinka xaqiiqooyinka cusub ee labada go'aan-qaadashada ugu dambeeyay iyo mustaqbalka xalinta dhibaatooyinka iyo.
Barashada Xeeladaha-Doorashada iyo shaqaalaynta habab educationANDtutorial iyo daaweynta haboona tababarka xaaladda ama marka hanashada arrimaha ku cusub.
waxtarka Monitoring-TrackingPEREvaluating shirkadaha, dadka kale ee, ama qofka ka fiirsan tallaabooyinka lagu saxayo ama in la abuuro horumar.
Social Perceptiveness-In ka dhawrsada badnaanta othersI iyo fahamka sababta ay fal halka ay sameeyaan.
falalka Coordination-Beddelidda la xiriira kuwa kale’ tallaabooyinka.
Salesmanship-oolka ah kuwa kale si ay u badalaan dhaqanka ama madaxooda.
Gorgortanka-qaadashada dadka kale si wadajir ah oo isku dayaya in ay heshiiyaan kala duwanaansho.
dadka kale Tababarka tababarenimo sida saxda ah inay u dhaqaaqdo.
Orientation-Positively Service isku dayayaan in ay helaan siyaabo si ay awood qof.
dhibaatooyin adag iyo faahfaahinta critiquing in lagu xiriiriyo hirgeliyaan doorasho iyo la baaro iyo in la horumariyo beddeli Advanced Lagu Xallinayo Dhibaatada-kala.
Hawlgallada Falanqaynta-Kormeerida dooni iyo shuruudaha Ganacsi iyo in la sameeyo qaabka a.
waxyaabaha Engineering Design-qabsiga ama samaynta iyo tiknoolaji si ay u shaqeeyaan baahiyaha user.
qalabka Selection-Garashada iyo qalabka ee nooca Gear loo baahan yahay si dhab ah in la sameeyo shaqo.
codsiyada wajigeeda-xiridda, mashiinada, kaybalka, ama aaladaha in guud ahaan buuxiyaan shuruudaha.
Deji-curinta barnaamijyo computer la xiriira hawlaha in tiro badan yihiin.
Hawlgallada dials Tracking-Galitaanka, tilmaamayaasha, ama signalada dheeraad ah si loo hubiyo in ay jirto qalab ah fulinta ku habboon.
Function iyo hawlgallada xamili-Xakamaynta ee qalabka ama barnaamijyada.
Dayactirka-fulinta dayactirka joogtada ah ee qalabka iyo go'aan goorta iyo nooca daryeelka loo baahan yahay waxay noqon doontaa.
Dhib-Aqoonsiga arrimo ka dambeeya qaladaad hawlgalka iyo go'aaminta waxa la sameeyo oo ku saabsan mid ka.
qalabka ama lagu daydo isticmaalka qalabka loo baahan yahay doonnida-hagaajinta.
baadhitaanka iyo imtixaanka ee alaabta Quality Control Research-Sameynta, bixiyeyaasha, ama farsamooyinka inuu xukumo tayada ama hufnaan.
Talada iyo go'aan-qaadasho-ka fikirto kharashka qaraabo iyo faa'iidooyinka ka mid ah tallaabooyinka ay u badan tahay in la helo mid ka mid ah in uu yahay haboon.
hagaajin Falanqaynta-Go'aaminta waxa sort of barnaamijka waa u qabtaan iyo sida ay ganacsiyada, xaaladaha, iyo goob saamayn ku yeelan kara natiijooyinka.
hababka ama tilmaamo ah waxqabadka nidaamka Methods Falanqaynta-Go'aaminta iyo sidoo kale falalka lahaa baahan yahay in la hagaajiyo ama waxtarka xaq u, qaraabo in ujeedooyinka mishiinka.
dadka kale Time-Management-Xakamaynta’ markii ay weheliyaan mid ka mid ah ayaa muddo shakhsiyeed.
Maamulka Savings-Go'aaminta sida dakhliga loo isticmaali doonaa in ay hawsha la sameeyaa, iyo xisaabiyenimo kharashyadan.
Kormeerka Product Methods Arka iyo gaaridda isticmaalka habboon ee qalabka, Astaamaha, iyo sahay u baahnaa si uu shaqada soo doortay samayn.
Kormeerka Shaqaalaha Resources-In qofka, dhiirigelinta, oo dooneysa waawayn halka ay u shaqeeyaan, go'aaminta ee dadka waawayn ugu waxtarka badan ee aad shaqo.
Degree Dugsiga Sare (ama GED ama dugsiga sare ee isu-Certification)
In ka badan 1 sanno, ku dhowaad 24 bilood oo ay ka mid yihiin,
Maamulka Task Skills Shuruudaha
Concern ku saabsan Kuwo kale – %
Is Control – %
WAAFAJINTA / Freedom – %